Raha reraka ny sultry resorts Thailand sy ny mafana ny tora-pasika ao Meksika, ny fanahiko dia mitaky voadioTonga soa eto amin'ny site. Ny vohikala vita fanoloran-tena ny Norvezy, ny mahatalanjona tsara tarehy sy mahafinaritra ny endriky ny, ny manan-karena ny kolontsaina, izay tonga amintsika amin'ny alalan'ny taona. Norvezy miakatra avy any an-tendrombohitra mirehareha sy tapa-kevitra, toy ny fairyland. Ny goavana, amoron-dranomasina fjords notapahina mafy ho any amin ny tany, fananganana hentitra toerana tsara tarehy. Izany hanalefahana ny maha henjana ny tara ny masoandro, izay nanapaka ny vato krystaly rivotra madio. Ny renivohitry ny Norvezy hahafantatra kokoa ny Tanànan'i Oslo ny renivohitra ny Norvezy, ny mianatra azy sy ny endri-javatra. Fananana any Norvezy Famaritana, ny pricing, dia ny endri-javatra, an-trano, ary amin'ny ankapobeny fanazavana. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka mahita ny fampiasana ny mety fikarohana sakafo, na amin'ny alalan'ny fampiasana ny fikarohana eo amin'ny tranonkala, eo amin'ny tena sakafo. Eny, ary ahoana no mety tsy ho tia raha izy no mahafinaritra fotsiny: ny tena miavaka, tsara indrindra sy aina indrindra eto an-tany. Alaivo sary an-tsaina ny hatsiaka Norvezy, ny antsasaky izay faritany mitoetra ao ny faribolan-tendrontany Avaratra, tsy tapaka ny laharana voalohany tamin'ny fandaharana ny tsara indrindra ny firenena mba ho velona, ary ny androm-piainan'ny olona eto ny iray lava indrindra eto an-tany. Ny mponina any Norvezy ihany efatra tapitrisa, ny antsasaky azy ireo mipetraka ao amin'ny renivohitra. Rehetra ny Norwegians iray lafo ny fitiavana ny firenena sy ny fitiavana ny zanany sy ny fanajana ny mpiara-monina.
Ary ny toetry ny fitiavana tsy amin'ny teny fa amin'ny asa.
Hampanompo ny tsy misy na dia miezaka.
Ny Norwegians niara-niasa taminy.
Ny herinaratra azo avy amin'ny riandrano, ary ny lalana handravaka ny tontolo. Eto ihany ny lalamby manara-maso dia nanorina ny soso-kevitr'izy ny picturesqueness ny fomba fijeriny avy ny Varavarankely.
Any Norvezy raiki-pitia avy hatrany
Nadika avy amin'ny teny frantsay ny 'taona' dia midika hoe 'Helo-drano' na 'Bay'.
'Viking' dia hoe, izay sambo no ao amin'ny Helo-drano. Eny, raha izany, dia saika ny rehetra Norwegians dia Vikings ary amin'izany andro izany. Misy sambo saika isam-pianakaviana, sy mirehareha amin'ny azy dia be kokoa noho ny fiara iray marika malaza, ary mavitrika amin'ny fampiasana: ho an'ny dobo manerana ny fjord lavitra teo an-tanàna ho an'ny jono sy ho an'ny fianakaviana mandeha.
Ny fitiavana ny ranomasina dia tsy ny hany zavatra izay mampiray Vikings taranaka fara mandimby.
Tsy maty ny lehibe literatiora ny sagas.
Velona telo am-polony mahagaga hazo fiangonana, izay ny taona dia efa nihoatra ny arivo taona ny tokonam-baravarana.
Ao amin'ny tranom-bakoka dia afaka mankafy mafy fanaka.
Fahiny lapa sy ny fiangonana nampita ny taranaky ny olo-malaza 'dragona style', manaitra be rendrarendra sy tsy manam-paharoa.
Norwegians izany dia tena sarobidy ary tsy tapaka ampiasaina ao amin'ny atitany haingo. ao ny lamba, dia tiany ary na dia ny firavaka. Na izany aza, na inona na inona ny vaovao tsy vahiny mba Norwegians: mareva-doko kely trano Alesund. ny iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao amin'ny firenena, izay naorina ao amin'ny fomba ankehitriny, ataovy ohatra ny mahazatra ny tanàna taonjato faha. Izao tontolo izao no mihevitra fa ireo no tia vola. ny tia ady Janga sy ny mponina ao Norvezy dia mino fa ireo no taranaky ny fahiny titans izay nonina Pianakaviana tany alohan 'ny hahatongavan' ny mpanompo sampy andriamanitra ny Thor. Araka ny angano fahiny ny resabe foana ny zavatra hantsam-bato, ny ala, ny vongan-dranomandry sy ny ranomasina. Ary avy eo ihany no mampidi-doza ho an'ireo izay rehetra izany tsy fanajana. Indrisy, ny Kristianina izay tonga tao Norvezy tamin'ny taonjato faha, ary indrindra fa tsy tia ny resabe. Ny ratsy 'sary' ireo zavaboary avy Pianakaviana pretra efa niasa mafy nandritra ny mihoatra ny zato taona. Nisy mihitsy aza St. Olaf fa mety hivadika trolls ho vato. Hihaona ny Troll foana ny zava-tsarotra (rehefa dinihina tokoa, ireo ankizy ireo no vato petrified amin'ny voalohany tara-masoandro), miampy ireo niezaka foana mba hanalavitra ny olona, ny fifidianana ho an'ny fiainana ny ala matevina sy tsy azo atonina harambato, sy ny lava-bato. Indraindray ireo hiseho eo amin'ny olona ao amin'ny olombelona ny teny. Tena mahaliana dia ny olona nikatsaka ny hanao amin'ny resabe. Satria fantany fa raha toa ka hanorina fifandraisana tsara aminy, ny Troll dia foana ny fiverenana tsara ho an'ny tsara.
Ankoatra izany, io no resabe nampianatra ny fahiny Norwegians fanamboaran-tsambo, seafaring, fanenomana ary ny maro hafa ny asa tanana.
Feno fankasitrahana foana ny olona ny fanaratsiana amin'ny fahatsiarovana tsara, atao hoe ny voninahitra maro hantsam-bato ary ny hadilanana. Ny lalana ny trolls' ny fitiavana mpamily tafahoatra, sy ny 'Troll Wall' mpihanika sy ny hang-gliders. Sary trolls ny Norwegians ampiasaina ho toy ny talisman, afaka mampitombo ny fahaiza-manao na inona na inona asa tanana, sy ho Fahatsiarovana faly hitondra ny mpizaha tany.
Tafahoatra: 'ny ny Lalana ny trolls' ny iray amin'ireo tsara indrindra sy mandritra izany fotoana izany, mampidi-doza ny tendrombohitra serpentines Norvezy.
Mandalo ny mandalo, dia feno toe-javatra mampidi-doza ny efa ho valo ambin'ny folo degre.
olom-pantatra eny an-dalambe video an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat manaitaitra Chatroulette online Mampiaraka toerana fisoratana anarana maimaim-poana video Mampiaraka ny vehivavy online mampiaraka toerana video Skype Dating free ny lahatsary amin'ny chat vehivavy afaka mihaona